भारत भ्रमण र सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ६ प्रश्न : यसो भन्छन् प्रचण्ड | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
भारत भ्रमण र सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ६ प्रश्न : यसो भन्छन् प्रचण्ड	हरेक विषयलाई साह्रै गलत अर्थ मात्र लगाउनु उचित होइन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर आइतबार दिउसो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा आइपुगे लगत्तै पत्रकारहरुसँग भ्रमणबारे संक्षीप्त कुरा गरे । उनीसँगको भेटमा पत्रकारहरुले गरेको सवालजवाफलाई खबरडबलीका लोकराज जैसीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन् –
१. भारत भ्रमण कस्तो भयो ? त्यहाँ तपाईले नेपालको तर्फबाट गरेका भेटघाटहरु के कस्ता रहे ?
समग्रमा यस भ्रमणबाट नेपाल र भारतकाबीच सदियाैंदेखि रहदै आएको घनिष्ट एवम् बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुढृढ गर्न मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लागेको छ । मेरो यस राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबिच विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ ।
भारतको केन्द्रीय फाउण्डेशनले मेरो सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यहाँका विशिष्ट वर्गलाई २१ औं शताब्दीमा नेपाल र भारतबीच हुनसक्ने साझेदारीबारे विशेष सम्बोधन गरेँ । नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको नेपालीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएँ । नेपालको हित र विकासको विषयलाई भारतीय सरकारसँग छलफल गर्ने बताएँ ।
भारतीय निजीस्तरका शीर्ष संस्थाहरु एसोचाम, सीआईआई, बिक्की लगायतले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय उद्यमीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेँ ।
नयाँ दिल्लीमा मसँग भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेटली तथा उर्जा राज्यमन्त्री पियुष गोयलले भेटघाट गर्नुभयो । उहाँहरुसँग विषयगत कुराकानी भयो । आपसी सहयोग लेनदेनको वातावरण बनाउन उहाँहरु पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ । भारतका पूव प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंह, भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोबल लगायत भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि मेरो सौहार्दपूर्ण छलफल भयो ।
भारतका हमामहिम राष्ट्रपति सँग भएको भेटमा मैले नेपाल र भारतको दुई पक्षिय हितको विविध विषयमा कुराकानी गरेँ । उहाँलाई नेपालको भ्रमणका लागि आग्रह गरेको छु । उहाँले नेपालको राजकिय भ्रमण गर्ने बिषयमा सकारात्मक कुरा भएको छ ।
भ्रमणको क्रममा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित नाग्पा घाँग्रे जलविद्युत परियोजनाको निरीक्षण गरेँ । उच्च पहाडमा रहेको ठूलो जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय र राष्ट्रिय विकासमा पुर्याएको योगदानकाबारेमा जानकारी हासील गर्ने मौका पाएँ । हरिद्वारस्थित पतंञ्जली योगपीठको भ्रमण गरी खाद्य तथा जडिबुटी पार्कको अवलोकन गरें । त्यो सम्भावना नेपालमा पनि भएको अनुभुति भयोे ।
२. तपाईले गरेका मुख्य सम्झौता, सहमतिहरु के के हुन् ?
भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत ऋणबारे संशोधित सम्झौता गरिएको छ । भूकम्पपछिको उद्धारका लागि प्रदान गरेको सहयोगलाई प्रभावकारीरुपमा उपयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
दुई देशको खुला सीमानाका कारण हुन सक्ने जोखिम र अराजक गतिबिधीको बिषयमा मैले कुरा गरेँ। सीमा क्षेत्रमा दुई देशको समान सुरक्षा चासो हुनुपर्ने भनाई मैले राखेँ। सीमा सुरक्षालाई मजबुत पार्न दुबै देशका सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । खुला सीमानाको दुरुपयोग गरि हुनसक्ने अपराधिक कृयाकलाप रोक्न समान धारणाको विकास गरिएको छ ।
जलविद्युत दुई देशको साझेंदारीको प्रमुख क्षेत्र हुनुपर्ने विषयमा मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरे । मोदीजी पनि यसमा सकारात्मक हुनुभयो। भारतले हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरण अन्तर्गत बुटवल जोड्ने सिमापार टान्समिटरलाईन र हेटौडा तथा ढल्केवरमा विद्युतीय सव स्टेशनको निर्माण गर्ने सम्झौता भयो ।
भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने तथा निर्यात व्यापार बढाउने बिषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपालको औद्योगिकरण तथा व्यापार विस्तारमा भारतका सार्वजनिक एंव निजि क्षेत्रको सहभागिताको लागि आग्रह गरेको छु । नेपालको विकास निर्माणको लागि भारतका निजि कम्पनिलाई प्राथमिकता दिइने पनि दुई देश बिच सहमति भएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने हुलाकि सडकको पहिलो चरण निर्माणका लागि परार्मशदाता नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
कास्कीमा पोलिटेक्निक निर्माण योजनाहरुका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौता (विप्पा) कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विभिन्न उपाय र प्रकृया अबलम्बन गर्ने दुबै पक्षले सहमति जनाएका छाैं ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रतिवेदन डीपीआरको अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिनेबारे दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
दुवै मुलुकहरु व्यापार तथा पारवाहन कार्यमा सहजताको लागि थप उपायहरु अपनाउन सहमत भएका छौ ।
बिगतमा भएका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सम्झौताहरुको सफल कार्यान्वयन गर्ने र चालु अवस्थामा रहेका परियोजनाहरुको निरन्तरता लगायतका विषयमा छिट्टै परिणाम आउने गरी काम गर्ने सहमति भएको छ । साथै आपसी सहयोगका अन्य विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं ।
३.संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा भारतले नेपालसँग मिलेर अडान लिने’ भनेको छ, त्यो भनेको के हो ? नेपालको परराष्ट्र नीति अब भारतमा परनिर्भर भयो भन्ने हो त ?
नेपाल र भारतबीच पुरानो सम्बन्ध छ । हामीले विगतदेखि नै एक आपसमा विविध प्रकारका सहयोगहरु लिने दिने गरी आएका छौं । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको यो वाक्याशंले हिजोदेखि मिलेर आएका विषयमा मिलेर जाने भन्न खोजेको हो ।
सन् २००४ सालदेखि नै भारतलाई नेपालले साथ समर्थन गर्दै आएको देखिन्छ । अहिले मैले केहि नयाँ सम्झौता गरेकी भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दछु । मैले त्यस्तो कुनै नयाँ सम्झौता गरेको छैन । तर दुई मुलुककोबीचमा पहिलेदेखि मिलेका विषयमा मिलेर जाने सहमति भएको हो । यसको अर्थ हाम्रो परराष्ट्र नीति भारतमा परनिर्भर हुन्छ कि भन्ने प्रश्नै हुँदैन, त्यस्तो होइन ।
४.भारतीय सहयोगमा सञ्चालित प्रोजेक्टबारे सहमतिपत्रमा ‘ओभरसाइट’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, यसले राष्ट्रियतामा आँच आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
भारतले लगानी गरेका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नका लागि दुई देशले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । ती योजनाहरु कसरी समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले त्यो ओभरसाइड मतलब मोनिटरिङ गर्ने सहमति भएको हो । त्यसले भारतीय सहयोगमा संचालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
५. दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्ध समदुरीमा विकास गर्ने कुरा गर्दा त्यसले चीनसँगको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा फाटो आउँछ कि ? यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
भारतसँग गरिएको सम्बन्ध विस्तारले चीन वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रसँगको हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने कुनै ठाउँ छैन । हामीले अहिले गरेको कुरा भारतसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा हो । हामी चीन वा अन्य मुलुकसँग पनि प्रगाढ र राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौ । भारतसँगको सम्बन्धका आफ्नै आयामहरु छन् भने चीनसँगको सम्बन्धका पनि आफ्नै आयामहरु छन् । हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन दुवै सँग मित्रवत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका छौं । दुवैसँग समान सम्बन्ध बनाउने कुराले नै त्रीपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ ।
६. नेपालको संविधानको विषयमा भारतसँग सोध्नुपर्ने वा जानकारी दिनुपर्ने थियो र ? तपाइँले त त्यो कुरा पनि गर्नु भएछ नि ?
संविधान नेपाली जनताले नै बनाएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफै बनाएका छन्, यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । राजकीय भ्रमणमा म आफै गएका बेला छिमेकी देशको विषयमा जानकारी राख्न चाहनु र आपसी जानकारी दिने लिने गर्नै हुदैन भन्ने होइन । संविधानको विषयमा त्यो विषय राख्दा उचित हुने भएकोले नै मैले राखेको हो । किनभने यतिबेला हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा छौ । कार्यान्वयन गर्नको निम्ती हामी सकेसम्म सहमति मिलाएर जान्छौ, त्यसमा भारतले सहयोग र समर्थन गर्नु राम्रै कुरा हो । त्यहाँ गएर मैले संविधानको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । हरेक विषयलाई साह्रै गलत अर्थ मात्र लगाउनु विल्कुल उचित होइन ।
अशोज ३ गते, २०७३ - ०९:०४ मा प्रकाशित